West Brom vs Arsenal – Pulis vs Wenger – Wax Walba Oo Ku Saabsan Kulanka Galabta Ka Dhici Doona Hawthorns. - Wargane News
Home Sports West Brom vs Arsenal – Pulis vs Wenger – Wax Walba Oo...
Arsenal ayaa marti u noqon doonta West Bromwich Albion iyadoo ka warqabta iney 4-dhibcood ka hooseyso kooxda Liverpool oo fadhisa booska 4-aad, balse laba kulan ayey gacanta ku heysataa Gunners.
Sidoo kale West Brom xagaagan hormar fiican ayey sameysay waxeyna ku jirtaa kaalinta 8-aad iyadoo 7-dhibcood u jirta booska 7-aad ee ay fadhiso Everton, balse labadii kulan ee ugu dambeeyay wey lumisay.
Kulanka: West Brom vs Arsenal
West Brom garabkeeda Phillips ayaa seegay sadexdii kulan ee ugu dambeeyay madama uu ka xanuunsanayay muruqa, waxaana maqnaashaha kulankaan uu kula biiri doona James Morrison.
Salomon Rondon ayaa dib ugu soo laaban kara safka hore kaas oo aan 13-kulan wax gool ah dhalin, guuldaradii Everton ee isbuucii hore badal ayuu ku yimid.
Da’yarka England Oxlade-Chamberlain ayaa laga saaray kulankii ay 5-0 ku xasuuqeen Lincoln kadib markii uu dhaawac muruqa ah soo gaaray, balse waxaa lasoo sheegayaa inuu taam u noqon karo kuulanka maanta.
Danny Welbeck iyo Alex Iwobi ayaa kasoo bogsooday xanuunkii ay la ildarnaayeen, balse Gibbs ayaa shaki la galinayaa inu ciyaaro, halka Mohamed Elneny iyo Santi Cazorla ay seegi doonaan.
Tony Pulis ayaa guul gaaray kaliya hal kulan sagaalkii kulan ee ugu dambeeyay oo uu wajahay kulamada Premier League-ga Arsenal, 2-barbaro iyo 6-guuldaro ayuuna helay, guuldaradii (D2 L6), inkastoo kulankii gurigeeda ee xagaagii hore ay guul 2-1 ah gaareen.
Pulis kaliya wuxuu lumiyay kaliya hal kulan lixdii kulan ee ugu dambeysay oo ay Arsenal marti u noqoto koox uu leylinayay mudada Arsene Wenger, 3-guul iyo 2-barbaro iyo 1-guuldaro, afartii kulan ee ugu dambeysayna wax guuldaro ah kama qaadan.
Gunners ayaa lumisay kaliya hal jeer 12-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay wajahday West Brom, 9-guul iyo 2-barbaro ayaa u dheeri ah.
Foster, Nyom, Evans, McAuley, Dawson, Yacob, Livermore, Fletcher, Chadli, Brunt, Rondon
Cech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Coquelin, Ramsey, Walcott, Iwobi, Ozil, Sanchez
Aragtidaada Ku Dhiibo Facebook Ama Qeybta Fekradaha Ee Hoose
Somalia: Qarax iyo Dilal Ka Dhacay Magaaladda Muqdisho
Real Madrid oo hanatay Champions League markii labaad oo xiriir ah kadib guul ay ka gaartay Juventus